DEG-DEG: Arsenal Oo Heshiis La Gaadhay Thomas Partey Iyo Waxa Heshiiskiisa Kaga Xidhan Gunners. | Dhaymoole News
Maamulka kooxda Arsenal ayaa heshiis la gaadhay xidiga saamaynta badan ee kooxda Atletico Madrid ee Thomas Partey kaas oo Gunners lala xidhiidhinayay bilihii ugu danbeeyay.
Markii ugu horaysay ee si fiican loo ogaaday xiisaha Arsenal waxay ahayd markii uu aabaha dhalay Thomas Partey uu warbaahinta u sheegay in wiilkiisu uu doonayo in uu Arsenal ku biiro laakiin war hadda soo baxay ayaa shaaciyay in Arsenal ay heshiis shaqsi ah la gaadhay Partey.
Arsenal ayaa Thomas Partey heshiis kala gaadhay qodobada qandaraaska uu Emirates Stadium ku iman karo laakiin halka arin ee ku xidhan ayaa ah in ay kooxda Atletico Madrid heshiiska kooxeed la meel dhigto.
Arsenal ayaa kooxda Atletico Madrid u soo bandhigtay Alexandre Lacazette si ay iskugu badashaan Thomas Partey waxayna wararku sheegayaan in Diego Simeone uu horeba aad ugu jeclaa Lacazette isla markaana uu xidiga reer France aad u jecel yahay.
Laakiin in Arsenal ay hadda heshiiska shaqsiga ah la gaadhay Thomas Partey waxay muujinaysaa rabitaanka xidigan ee uu Arsenal ku doonayo waxayna wararku sheegayaan in xataa haddii ayna Gunners u soo bixin Champions league uu dalabka Gunners socon doono.
Inkasta oo uu Alexandre Lacazette ka mid yahay ciyaartoyda muhiimka ah ee Arsenal, haddana saamaynta uu Thomas Partey ku yeelan karo kooxda Mikel Arteta ee Arsenal ayaa ah mid aan la barbar dhigi karin saamaynta Lacazette.
Jamaahiirta Arsenal ayaa muujiyay in haddii ay helaan adeega Thomas Partey in ay heli doonaan khadkii dhexe ee kooxdooda ugu fiicnaa muddo siddeed sanadood ah.
Thomas Partey ayaa hore loola xidhiidhinayay kooxaha kale oo ay Liverpool ka mid tahay, laakiin Reds oo dhibaato wayn kala kulantay xidigan kulamadii Champions league ayaan xiisaheeda hadal dhaafin balse Gunners ayaa talaabooyin waa wayn qaadaysa.
Thomas Partey ayaa aad u jecel in uu ka ciyaaro kooxda Arsenal waana sababta uu u aqbalay qodobada heshiiska shaqsiga ee uu Gunners ku iman karo laakiin dhamaystirka heshiiskan ayaa ku xidhnaan doona dhinaca Atletico Madrid iyo sidoo kale go’aanka uu Lacazette ka qaadan doono in uu Atletico Madrid u wareegi karo.